Satria Tsy Mety Mandray Mpitsoa-ponenana Fanampiny i Japana, Niparitaka Ny Sary Namboarina Misy Fankalahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Desambra 2015 5:58 GMT
Lahatsoratra: “Te hanana fiainana azo antoka sy madio, mihinana sakafo matsiro, mivoaka mandehandeha, sy manao zavatra mahafinaritra, ary miaina fiainana mihaja aho… ary olon-kafa avokoa no mandoa izany rehetra izany. Manan-kevitra aho. Hanao mpitsoa-ponenana aho.” Loharano: Sary niparitaka tao amin'ny media sosialy.
Na dia nahatsikaritra sy nanitsy sary namboarina iray hosoka amin'ny teny anglisy momba ny famerana ataon'ny Japana amin'ny Miozolomana aza ny mpiserasera aterineto, dia lavitry ny marina raha hoe tsara fandray mpifindramonina i Japana.
Raha ny marina, ny vaovao mieli-patrana manerantany tamin'ny mihitsan-dravina amin'ny firohotan'ny mpitsoa-ponenana avy any Torkia hamonjy an'i Gresy ary avy eo amin'ny faritra hafa ao Eoropa no niafara tamin'ny fielezan'ny sary iray namboarina maneho ny endrika ratsy manokana an'i Japana momba ny krizy.
Miampanga ireo mpitsoa-ponenana ho “manao hosoka” amin'ny manjò azy ireo ny sariitatra iray niparitaka be tao amin'ny Facebook tao Japana tamin'ny Septambra sy Oktobra. Ny afisy dia ahitana sariitatra tovovavy iray ahitana soratra hoe: “Te hanana fiainana azo antoka sy madio, mihinana sakafo matsiro, mivoaka mandehandeha, sy manao zavatra mahafinaritra, ary miaina fiainana mihaja aho… ary olon-kafa no mandoa izany rehetra izany. Manan-kevitra aho. Hanao mpitsoa-ponenana aho.”
Nozaraina tao amin'ny facebook ity sary namboarina momba ny mpitsoa-ponenana ity. Tsy mampino. Raha hitanao fa nozaraina izany, ampilazao ny Facebook.
Noforonina sy nampidirin'ilay mpanao sariitatra Hasumi Toshiko ny sary. Nanafintohina ny sary noho ny tsy fisian'ny famindram-po mihitsy manoloana ny manjo ny mpitsoa-ponenana, izay mandositra ny ady sy ny tsy fandriampahalemana, nanapa-kevitra hametraka ny fototry ny sariny amin'ny sary nopihana i Hasumi -sary tovovavy Syriana nalain'ilay mpaka sary John Hyams, izay nampiasaina tamin'ny Hetsika Vonjeo ny Ankizy ny iray.
Tohina+malahelo tanteraka, olona misafidy hampiasa sarina tovovavy tsy manan-tsiny iray mba hanehoana fitsarana an-tendrony feno faharatsian-toetra tahaka izao
Taorian'ny fangatahan'i Hyams sy ny fanangonan-tsonia voalaza fa nosoniavin'ny olona maherin'ny 10.000 tao Japana, nofafan'i Hasumi ny sary.
Politikan'ny mpitsoa-ponenana “manakatom-baravarana” ao Japana
Mampiseho ny raharaha Hasumi Toshiko fa raha fiarahamonina misokatra sy mandefitra i Japana amin'ny ankapobeny, mety ho tsy miraharaha sy masiaka tahaka ny any amin'ny toeran-kafa rehetra ny kolontsaina aterineto ao amin'ity firenena ity.
Ankilany, milaza ny hafa fa tsy misy dikany ny fahazakan'ny fiarahamonina Japoney ny miozolomana sy ny hafa vitsy an'isa, raha oharina amin'ny firenena hafa manankarena toa an'i Canada sy Alemaina, izay efa nanolo-tena amin'ny fandraisana mpitsoaponenana, dia vonona amin'ny fametrahana sakan-dalàna tsy idiran'ny mpialokaloka kosa ny governemanta Japoney.
Vitsy ny mpitady fialokalofana noraisin'i Japana noho ny firenena mpanankarena hafa. Tamin'ny taona 2013, nandray olona mitady fialokalofana 24.300 i Aostralia, Alemaina kosa nandray 109.600. Mifanohitra amin'izany, tamin'io taona io ihany, 3.300 fotsiny no noraisin'i Japana, ary tena vitsy tamin'ireo olona no nekena ho mpialokaloka tamin'ny fomba ofisialy.
Tamin'ny 2014, nahazo fangatahana sata ho mpitsoa-ponenana 5.000 i Japana, saingy 11 ihany no neken'ny Biraon'ny fifindramonina tao amin'ny firenena, na 0.2% fotsiny tamin'ireo mpangataka 5.000 mendrika fankasitrahana sy fialokalofana ho mpialokaloka.
Raha ny marina, matetika antsoina hoe “firenena mihidy varavarana ho an'ny mpitsoa-ponenana” i Japana.
Matetika sokajiana ho miadana sy mikorontana ny paika ijerena ireo mpitsoa-ponenana ao Japana, miafara amin'ny fanemoram-potoana ela dia ela. Nilaza ny fikambanana tsy Miankina Fikambanana hoan'ny Mpitsoa-ponenana ao Japana hoe:
Tsy misy fotoana raikitra napetraka ara-panjakana hankatoavana mpitsoa-ponenana, ary nisy mihitsy tranga naharitra 9 taona (!) vao tonga ny fanapahan-kevitra farany?
Zara raha misy fanohanana ofisialy ho an'ireo 12.000 na ireo olona mitady fialokalofana ao Japana, izay voarara tsy hiasa eo am-piandrasana ny fanapahan-kevitra mikasika ny faneken'ny manam-pahefana azy ireo na tsia.
Matetika hita fa aleon'i Japana mifanaraka amin'ireo mpitsoa-ponenana lavidavitra kokoa, amin'ny alalan'ny fanampiana ara-bola. Araka ny filazan'ny Vaomiera Ambonin'ny Firenena Mikambana misahana ny Mpitsoa-ponenana, dia mpandray anjara lehibe faharoa ao amin'ny sampan'ny Firenena Mikamana ho an'ny mpitsoa-ponenana i Japana tamin'ny 2014, nanolotra lelavola maherin'ny 181 tapitrisa dolara.
Inona no idiran'ny taham-pahaterahana amin'izany?
tamin'ny firesahana teo anoloan'ny Firenena Mikambana tamin'ny Septambra 2015 ny Praiminisitra Japoney Shinzo Abe no nampanantena hanome vola 1,5 lavitrisa dolara ho fanampiana ny Afovoany Atsinanana.
Nilaza mazava tsara ny fanoheran'i Japana handray mpitsoa-ponenana maromaro i Abe. Tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny teny Japoney (Fizarana 1, Fizarana 2), tsy nanakatom-baravarana tsy handray mpitsoa-ponenana bebe kokoa ihany izy fa nanamafy ny fametrahana mpitsoa-ponenana tamin'ny politikan'ny fifindramonina ihany koa, hoy izy: “Alohan'ny handraisana mpifindramonina na mpitsoaponenana, mila asa bebe kokoa avy amin'ny vehivavy sy ny zokiolona isika – ary tsy maintsy mampitombo ny taham-pahaterahana. “
Nanaitra ny sasany toy ny hafahafa ny valin-teny tao amin'ny foiben'ny Firenena Mikambana any New York, satria toa manafangaro ny fihenan'ny isan'ny vahoaka ao Japana amin'ny krizin'ny mpitsoa-ponenana izany.
Na ahoana na ahoana, noho ny toerany ara-jeografika, somary mitoka-monina amin'ny ady manerana izao tontolo izao i Japana, mety ho sarotra ny mandresy lahatra ny ankamaroan'ny Japoney fa maro ny zavatra tsy maintsy hatao mba hanekena ny mpitsoa-ponenana. Ary sarotra ny hamaritana ny fanohanana ilaina ao Japana amin'ny fanekena handray mpitsoa-ponenana bebe kokoa.
Nisy ny fitsapan-kevitra tsy ofisialy nataon'ny tranokala mpanangon-kevitra Ironna asks the question (manontany i Ironna):
Ahoana ny hevitrao momba ny politika Japoney tsy manaiky handray mpifindra-monina?
Tamin'ireo 3.200 nanontaniana, 2700 no namaly:
Tokony hoferantsika ny fifindra-monina